We.com.mm - Big Bag Show က အရမ်းမိုက်တယ်ဆိုပြီး ချီးကျူးစကားပြောလိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီ
Big Bag Show က အရမ်းမိုက်တယ်ဆိုပြီး ချီးကျူးစကားပြောလိုက်တဲ့ ဇဏ်ခီ
A Rode To Starry Night လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Big Bag Band ရဲ့ Unplugged Show ဟာ July လ ၁ ရက်နေ့မှာ စည်းကားစွာနဲ့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ထို Show ပွဲဟာ ပရိသတ်များစွာရဲ့ စိတ်ဝင်းစားခြင်းကို ရရှိခဲ့ပြီး တကယ့်ကိုလူကြိုက်များတဲ့ Unplugged Show တစ်ခုလိ့ုလည်း သိရပါတယ်။
ပရိသတ်တွေထဲမှာမှ ဥပါယ်တံမျဉ် ရဲ့ မင်းသား ဇဏ်ခီ လည်း ထို Show ပွဲကို သူအရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ Social Media ပေါ်မှာ “Amazing show! Presentation တွေေSာက်ရမ်းမိုက်တယ်.. Performance တွေ ေSာက်ရမ်းမိုက်တယ်.. Perfection ကိုရောက်အောင်တွန်းထားတဲ့ "P" သုံး "P" ပြည့်စုံတဲ့ show ပါ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ Show အပေါ်ခံစားချက်ကို မျှဝေထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် “Congratulations to Big Bag and the whole ensemble! So proud of you all!!!” ဆိုပြီးတော့လည်း ထပ်မံဂုဏ်ပြုချီးကျုးထားပါပြီး ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီကလည်း “အရမ်းကြိုက်!!! အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိ...Congratulations all!!” ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်။
မကြာခင်မှာ အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်တော့မယ့် Dolan အမွှာညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်
ယုန်လေး နဲ့ စူးရှထက် တို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုကြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေပေါ်ထွက်